Fuchsia OS yatotanga kugamuchira shanduko kubva munharaunda | Linux Vakapindwa muropa
Fuchsia OS iri kutogamuchira shanduko kubva munharaunda
Google yakazivisa kuwedzera kwemhando yekuvandudza vhura iyo Fuchsia OS inoshanda sisitimu uye inoshambadza izvo hereinafter, kuwedzera kune vashandi veGoogle, vamiriri venharaunda vachakwanisawo kutora chikamu mukusimudzira yeFuchsia OS, iyo shanduko dzichagamuchirwa muchirongwa.
Kurerutsa kutaurirana nevagadziri, zvinyorwa zvekuparadzira vanhu zvakaunzwa uye dhigi rekutsvagisa system, pamusoro peiyo modhi manejimendi manejimendi iyo inotsanangura nzira dzekuita sarudzo.
Iyo hurongwa hwekuenderera mberi kwekuvandudza kweFuchsia yakaburitswa zvakare, iyo inoratidza hukuru hukuru mafambiro uye zvekutanga.
Zvinonyanya kunetsekana zvinosanganisira kugadzira dhizaini dhizaini iyo inogona kukwidziridzwa zvakasiyana kubva kune kernel, pamwe nekuvandudza faira sisitimu yekuita uye kuwedzera maturusi ekuisa kune vanhu vakaremara.
Kutanga nhasi, isu tiri kuwedzera Fuchsia yakavhurika sosi modhi kufambisa ruzhinji kutora chikamu muchirongwa. Isu takagadzira nyowani nyowani tsamba dzekutumira dzehurukuro, takawedzera modhi yekutonga kujekesa kuti sarudzo dzakadii dzinoitwa, uye kuvhura iyo tracker yevamiriri vevanhu kuti vaone zviri kushandirwa. Seyakavhurika sosi yekuedza, tinogamuchira zvese zvinoyedzwa-zvakanaka uye zvemhando yepamusoro mipiro. Ikozvino pane maitiro ekuve nhengo yekutumira zvigamba, kana mutambi anonyora zvakakwana kuwana.
Uye zvakare, tiri zvakare kutsikisa tekinoroji mugwagwa weFuchsia kuti upe nzwisiso iri nani mukutungamira uye nekutanga kweprojekiti. Dzimwe nzira dzemumigwagwa dzakakwirira dziri kushanda padanho rekutyaira kugadzirisa kernel yakazvimiririra yevatyairi, kugadzirisa masisitimu emafaira, uye kuwedzera pombi yekuisa kuti iwanikwe.
Rangarira izvo mukati megadziriro yeprojekti Fuchsia, Google irikugadzira sisitimu yekushandira yepasi rose inokwanisa kushanda pane chero rudzi rwechigadzirwa, kubva kumabasa uye mafoni kune yakadzamirwa uye tekinoroji yevatengi Iko kuvandudza kunoitwa uchifunga nezve chiitiko chekugadzira iyo Android chikuva uye inofunga nezvekukanganisa kuri mumunda wekuyera uye chengetedzo.
Sisitimu yacho yakavakirwa paZircon microkernel, zvinoenderana nekuvandudzwa kweprojekti yeLK, yakawedzerwa kuti ishandiswe mumakirasi akasiyana siyana emidziyo, kusanganisira mafoni uye makomputa ako.
Zircon inotambanudzira LK nerutsigiro rwemaraibhurari akagovaniswa nemaitiro, danho revashandisi, kubata chinhu, uye kugona-kwakavakirwa modhi yekuchengetedza. Iwo madhiraivha anoitwa seanoshandira mushandisi nzvimbo maraibhurari akatakurwa neiyo devhost maitiro uye anotungamirwa nemaneja maneja (devmg, Maneja wedhijitari).
Zve Fuchsiyakagadzira yake yakajeka graphical interface yakanyorwa mumutauro weDart, uchishandisa iyo Flutter fomati.
Iyo projekiti zvakare inogadzira iyo Peridot mushandisi interface sisitimu, iyo Fargo package maneja, yakajairwa libc raibhurari, iyo Escher kupa system, iyo Magma Vulkan mutyairi, inoyevedza composite maneja, iyo MinFS, MemFS, ThinFS faira masystem (FAT mune Go mutauro) uye Blobfs, pamwe neFVM zvikamu.
Zvekuvandudza kunyorera ine rutsigiro rweC / C ++, Rust inobvumidzwawo muzvinhu zvehurongwa, mune network network, uye muPython mutauro unovaka system.
Maitiro ebhutsu anoshandisa system maneja, iyo inosanganisira appmgr kugadzira iyo yekutanga software nharaunda, sysmgr kugadzira iyo boot nharaunda, uye basemgr yekumisikidza mushandisi nharaunda uye kuronga iyo login.
Zvekuenderana kweLinux paFuchsia, akaronga raibhurari yeMachina, ndiwe inobvumira kumhanyisa chirongwa cheLinux mune yakasarudzika chaiyo muchina Yakasarudzika inoumbwa nekushandisa hypervisor zvichibva pane zvakatemwa naKernel Zircon uye Virtio, nekufananidza nekuvhurwa kweLinux kunyorera kwakarongedzwa paChannel OS.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyo noti, unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fuchsia OS iri kutogamuchira shanduko kubva munharaunda
Nharaunda: Pringados vanoshandira mahara kune imwe yemakambani akapfuma kwazvo pasirese uye vanoshandisa yakavhurika sosi pavanenge vachifarira uye kana zvisina kudaro, vanochinjira kune yakavharwa sosi. Muchidimbu, mune ino mamiriro, nharaunda = gilip manga *****
Red Hat Halts CentOS 8 Kubudirira mukufarira CentOS Stream
Bhash 5.1 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo